Indlu eHainer Bona abantu abayi-12 abane-sauna + indawo yokubasa umlilo - I-Airbnb
Indlu eHainer Bona abantu abayi-12 abane-sauna + indawo yokubasa umlilo
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguKai
Le ndlu inendawo yokuhlala eyi-160 sqm kunye namagumbi okulala ayi-5 kubantu abayi-10 kunye nabantu abayi-2. Ime embindini weLeipzig 's New Lake District kwiLake Hainer, ekumgama weekhilomitha eziyi-20 ukusuka kumzantsi weLeipzig City. Phakathi endlini kukho indawo yokutyela eyi-70 square/igumbi lokuhlala elineefestile ezinkulu, itafile yokutyela ende nendawo yokubasa umlilo. Kukho iindawo ezimbini ezinkulu, ukusuka phezulu apho unokubona khona ichibi. Le ndlu yenziwa ngabom iintsuku zentlalo kwisangqa esikhulu. Kubantwana kukho iincwadi ezininzi, iithoyizi kunye nendawo yokudlala.
Ukunikela ingqalelo: Okwangoku, umthetho we-2 G Plus usebenza kwi-Saxony kwiindawo zokuhlala, ngoko ukuqesha kuphela ukugutyungelwa nokuvuselelwa kunye nokuvavanywa. Ngaphandle kwabantwana, kunjalo.
Yagqitywa ngoAgasti 2018, le ndlu ilungele iintlanganiso kwiqela elikhulu labahlobo okanye intsapho, apho ukudibana kamnandi kusekuqaleni: ukupheka, ukuncokola, ukuhamba kunye nemidlalo, ukuhlamba, i-sauna kunye nohambo oluya eLeipzig. Ekubeni iSchillerhaus, ekumgama weemitha eziyi-200, idla ngokubhukishelwa imitshato okanye efana nayo, le ndlu ikwafanele amaqela amancinci afuna ukuchitha iintsuku ezimbalwa kwichibi njengenxalenye yemibhiyozo yosapho. Le nkampani ibisoloko iziqinisekisa ukuba zinee-workshop ezincinci.
Ukuba indlu ibonakala isuka phandle ngenxa yezakhiwo zayo zale mihla, inomtsalane kakhulu xa ungaphakathi. Endaweni yokujonga ihlabathi lonke ngaphandle kweshelufu, kukho izinto zakudala, imizobo eyenziwe ngumzobi weLeipzig, kunye nendawo efudumeleyo enamaplanga amaninzi. Kubaculi kukho nepiyano. Umgangatho wamaplanga onamafutha endlini ubekwe ngaphandle kwe-glue waza wasetyenziswa kuyo yonke indlu.
Le ndlu ikumgangatho ophezulu, kodwa yenzelwe iintsapho ezinabantwana ibe zininzi izixhobo zabantwana (imidlalo, iincwadi zabantwana, umphantsi wokukhasa owongezelelweyo, i-Playmobil, ikhothi, isitulo esiphakamileyo, imethi yokutshintsha, njl.)
Phakathi kule ndlu kukho indawo yokutyela eyi-70 sqm negumbi lokuhlala elinendawo yokubasa umlilo. Igumbi lineefestile ezinkulu ezijongene namanzi, itafile yokutyela ende eyenziwe ngamaplanga aqinileyo kunye nekhitshi elinewayini eyongezelelweyo/ifriji yeziselo, i-microwave, umatshini wokwenza ikofu (ikofu eqhelekileyo/akukho pads), imbiza ye-espresso, izixhobo zokubhaka kunye neziqholo ezisisiseko. Ukuba awufuni ukupheka: iSchillerhaus ekufutshane nayo iyakulungiselela ukutya ibe kukho neevenkile zokutyela kule ndawo.
I-iceing phezu kwekeyiki yendlu yindawo ephezulu eluphahleni, apho ujonga khona kwii-treetops nakwiLake Hainer. Le ikwayisauna enendawo yabantu abayi-3 ukuya kwabayi-4. Ithala elisezantsi linetafile yokutyela yabantu abayi-12, itafile yabantwana kunye negesi enkulu. La matye mabini ajikelezwe ngendlela eyahlukileyo, ngoko unokonwabela ilanga okanye umthunzi kuxhomekeka kwiminqweno yakho nakwixesha losuku.
Igumbi elinye lokulala linefenitshala yabantwana ngabom ibe linebhedi eyakhiwe ngamaplanga. Nangona kunjalo, le nto ikwanele kubantu abadala. Nangona kunjalo, inqanaba eliphezulu lingaphezulu kweemitha eziyi-2 ukuphakama. Ngoko kufuneka ube bhetyebhetye ngakumbi ukuze unyuke apha. Ibhari yokujima idityaniswe ebhedini, ngoko abantwana bangahamba-hamba apha.
Kukho i-TV encinci enesidlali se-DVD esakhelwe ngaphakathi kunye nezinto zokudlala ezininzi zabantwana. Abantwana banokuhamba ngesikhephe kwi-6 sqm kunye ne-1 m "umqolomba" ophezulu. Ukusuka apha ungajonga ichibi njengakwindawo enamavili amabini uze uhlale kamnandi ngemiqamelo emininzi. Ngoko abantwana banobukhosi babo abancinci apha kwaye banokwenza into yabo ingaphazamiseki ngoxa abantu abadala abasezantsi bekhululekile.
Xa ndiphawuleka, ndinee-inliners ukusuka kwi-35 ukuya kwi-44, onokuyisebenzisa.
Nceda uqaphele ukuba inani leendwendwe lingadluli kubantu abayi-12 KUQUKA iintsana/iintsana. Nokuba abantwana abancinci "bajonge kude": Baphinde bafune indawo yabo kwindawo ethile ngeekhothi, izitulo eziphakamileyo etafileni, njl. Ngenye indawo kufuneka ndize ndifune ukubeka umda ophezulu ukuze ndiphephe ukugcwala kakhulu kwendlu "ngehostele yolutsha".
Mna okanye kuwe njengeendwendwe, ukugcwala kakhulu kumnandi.
Umyalezo wabantu abazikhuphayo: Ukuba ufika nabantu abambalwa ngoko ke usebenzisa isiqingatha sendlu kuphela, ndiza kuthetha nam ngexabiso, nceda ucele!
4.91 · Izimvo eziyi-98
Le ndlu isembindini weLeipzig 's New Lake Land ngaselunxwemeni lwendawo endala yaseKahnsdorf kunye nehlathi elincinci. Ngaphambili unokujonga i-lagoon yaseLake Hainer uze ubuyele emva kwipaki kunye nembali yendlu yeSchiller kunye ne-manor. Nantsi i-Schillercafe, ichibi lokupaka, ibala elihle lokudlala labantwana kunye nebala lebhola. Kwizibuko ungasebenzisa iibhayisekile neenyawo kunye nezikhephe ngexesha lonyaka, izikhephe ezihamba ngezithuthi zabantu abayi-4 ukuya kwabayi-11 kunye ne-SUP
embindini yivenkile entle kakhulu enee-ice cream ezenziwe ekhaya kunye neekhekhe. 300 m kumantla endlu lwandle olunentlabathi olunesiqithi sokuhlamba. Kukho ezinye iilwandle ezinentlabathi kunxweme olusemntla. Kufutshane nechibi kukho iindawo ezininzi zasendle apho unokuba phakathi kwakho ehlotyeni.
IHainer See inkulu nge-560 ha (iyahambelana neendawo zebhola ekhatywayo eziyi-500), ukuya kutsho kwiimitha eziyi-50 ubunzulu kwaye inomgangatho wamanzi okuhlamba. Umzila ongaselunxwemeni unobude obuziikhilomitha eziyi-15 ukuya kutsho kwi-70%. Ngoko unokutyibiliza emkhenkceni kakuhle nangendlela ekhuselekileyo. Nangona kunjalo, kukho neendlela ezintle ezisecaleni komzila. Kwindawo esentloko kunxweme olusempuma, iindawo eziphakamileyo zaseScotland kunye nomhlambi wokufuya. Ngaphambi nje kokuba kukho indawo encinci yepikiniki ebukekayo.
I-Kahnsdorfer See emantla-ntshona ishiywe ngabom kwindalo. Akukho maziko abakhenkethi apha.
Nangona kunjalo, nabani na olindele enkulu njengetempile yezempilo, ukuthenga okanye imayela yeepati ujonge ngaphakathi. Nangona kukho iziganeko ezinkulu ezifana noMsitho weLagoon kunye noMsitho weSchiller, kwaye ngeempelaveki iiLeipzigers ezininzi zidla ngokuhambahamba echibini elidumileyo okanye iimoto zakudala zigoba echibini, kodwa izinto zizonke zipholile eKahnsdorf, ngokukodwa ngexesha elingaxakekanga. Ngentambama, oonothwal 'imini yonke abasuka eLeipzig baphinde banyamalala kwakhona kwaye iindawo zokupaka zingenanto kwakhona. Ukuba ufuna ukuba nenkqubo engakumbi, zininzi izibonelelo kule ndawo, ngokukodwa eLeipzig. Bona amacebiso am kwincwadi yam ebonisa iindawo kwiqhosha elongezelelekileyo.
Elunxwemeni olusemntla kukho iCafemobil Barina eqaqambileyo kunye nekofu emnandi kakhulu kunye nendawo yokuqesha izixhobo zemidlalo yamanzi ecaleni kwendawo yokukhempisha. Ungabhukisha nokukhenketha ngeenyawo kunye ne-Alpacas eLake Hainer.
Kukho umbhaki welali entle kwidolophana ekufutshane yaseGroßzössen. NgoLwesithathu phakathi ko-9 no-11 iyama phambi kweSchillercafe kukho nomntu othengisa inyama nombhaki. Kukho iimarike ezinkulu eNukieritzsch, eRötha, e-Espenhain naseBorna. EBorna kukho idolophu encinci endala enemarike.
I-Hainer See yenziwa ngumngxuma wamalahle onombala omdaka ibe yagcwala ngamanzi phakathi ko-1920 no-2010. Kwiminyaka embalwa, izindlu zeholide ezintsha zakhiwa apha kwaye kwakhiwa iindlela ezintsha kunye nolwandle. Ukongezelela, i-Schiller kunye nendlu ye-manor kunye nepaki, ngoko ukuthetha, intliziyo yeKahnsdorf, iye yalungiswa. Kwaye indalo yenza okungaphaya kokuqinisekisa ukuba amanxeba avulekileyo anyamalala.
Iidolophu ezikufutshane zaseEspenhain naseMölbis bezingabonakali kakuhle ebumdaka kwizityalo zombane zangaphambili kwaye bezijongwa njengezona ndawo zimdaka kwi-GDR. Phakathi ko-1911 nowe-1911, amalahle aye emgodini ovulekileyo kufutshane neKahnsdorf, apho abantu abayi-1,500 bakhe basebenza khona kwindawo evulekileyo. Ngokwezicwangciso ze-GDR, indawo evulekileyo yayiza kuqhutywa de kube ngo-2015. Ichibi libizwa ngokuba yidolophana yaseHain, eyawa ngenxa yeshishini elizimeleyo.
Ngamafutshane, yonke le nto kwixesha elidlulileyo kwaye enye yezona ndawo zinkulu emhlabeni ziba nefuthe: IKahnsdorf ngoku iphakathi kweLeipzig 's New Lake District, ummandla apho kwiminyaka yakutshanje enamachibi amatsha anamalwandle kunye namazibuko aye avela phantse nyaka ngamnye kwiimigodi zakudala ezivulekileyo.
Kwiminyaka embalwa edlulileyo, inqugwala likaOetti yayiyindlu kuphela engaselunxwemeni lweLake Hainer. Yayikwiminyaka yakutshanje kuphela apho kwakhiwa isitalato i- "An der Lagune" kunye nezinye izindlu eziselunxwemeni lwamanzi. Ngelishwa, i-lagoon yakhiwe kakhulu kwiindawo namhlanje, kwaye izindlu ezininzi ezintsha zibonakala zingenamtsalane kwaye azinamtsalane, zijikelezwe zii-carports, iindonga ze-conditioner, iingcingo eziphezulu, kunye neegadi zamatye acocekileyo. Ungaphikisana nje ngokungcamla...
Nangona kunjalo, kwindawo yekhaya leholide likaOetti liluhlaza kakhulu. Apha usabona kakuhle amanzi nehlathi elincinci lepaki enembali yeSchillerhaus phantse ifikelela emanzini apha.
Kodwa ke, eyona nto ibalulekileyo kukuba: indawo enjalo yeholide ibingalindelwanga apha kungekudala emva kokuwa kodonga, xa yonke into ibiyindawo yenyanga kwaye abantu abenza amalahle bebesitya indlela eya kuyo! Indalo yenza okungaphaya kokuqinisekisa ukuba amanxeba amalahle anombala omdaka. Apho namhlanje izikhephe zihamba ngenqanawa phambi kwendlu, iitreyini ezinombala omdaka eziqhutywayo kwiminyaka eyi-20 eyadlulayo kunye neetshimini zezityalo zombane kunye nemizi-mveliso yebriquette inuka ngasemva. Isityalo sokugqibela esinombala omdaka siza kukhutshwa ngo-8pm.
Umbuki zindwendwe ngu- Kai
Ngokuqhelekileyo ndiza kuba khona ngokobuqu xa ndifika ndize ndicacise yonke into ebalulekileyo ngokuhlala kwakho. Emva koko andisekho kwisayithi kodwa ndihlala ndifumaneka ukuba unemibuzo kwaye ndikhawuleza ukusuka eLeipzig ukuya kwiwebhsayithi
Ngokuqhelekileyo ndiza kuba khona ngokobuqu xa ndifika ndize ndicacise yonke into ebalulekileyo ngokuhlala kwakho. Emva koko andisekho kwisayithi kodwa ndihlala ndifumaneka ukuba u…